OwoKhozi FM uthi akabuyi uZondo | IOL Isolezwe
OwoKhozi FM uthi akabuyi uZondo
Isolezwe / 11 July 2012, 11:31am /
UMPHATHI siteshi woKhozi FM uBonga Mpanza uthi abantu abakhohlwe wuZondo bamukele abagqugquzeli abasha
USHAYA phansi ngonyawo umphathi woKhozi FM uthi ngeke bambuyisele emoyeni uPastor Sthembiso Zondo obedume ngezinkulumo ezakhayo kuKhozi FM, ohlelweni lukaLinda Sibiya, iVuka Mzansi.
UBonga Mpanza ophethe lesi siteshi uthe asisekho isidingo sokukhuluma ngalolu daba ngoba seluze lwaphelelwa nawumsoco.
“Abantu abakuvume ukuthi uKhozi FM ngeke lusenza lutho ngalolu daba, sesiludlulisile kuzosiza ukuthi nalabo balaleli abasalugcinile baludlulise,” kusho uMpanza.
Uthe kuyacaca ukuthi kunabantu abazifunela iphimbo likaZondo nje, ngoba laba abakhona (abagqugquzela abantu emoyeni) nabo benza umsebenzi oncomekayo.
“Iqiniso ukuthi wonke umuntu unekhono elehlukile kunomunye, uma bengase bangabaqhathanisi labo abakhona noZondo, yonke into ingahamba kahle,” kusho uMpanza.
Mayelana nezikhalo zokuthi lolu daba alusingathwanga ngendlela, uMpanza uthe izinqumo abazithathayo benza isiqiniseko sokuthi babeka abalaleli kuqala nokuthi izinqumo zizohambisana nabo.
Uthe abantu abake banike ithuba laba bagqugquzeli abakhona bakhohlwe yindaba kaZondo ngoba seyifana nento engekho.
“Abantu abazi ukuthi akuphelile ngomsakazo njengoba kuhambe uZondo, usazoqhubeka nje njengokujwayelekile. Kuzokukhumbuleka ukuthi emsakazweni kwakunoKansas City, Bhodloza Nzimande, Mandla Malakoane nabanye bahamba kodwa umsakazo usaqhubeka nanamhlanje, nathi njengabaphathi sizofika isikhathi sokuthi sihambe, umsakazo usazolokhu uqhubekile,” kusho uMpanza.
Ube esenza isibonelo ngomgadli eqenjini lebhola athe uma ehamba kutholakala omunye futhi akulokhu kukhalwa ngalo osehambile, kuba nesifiso sokuthi lo ofikile naye enze umsebenzi oncomekayo, wathi impilo ihamba kanjalo uthanda ungathandi.
Ube eseshiso okokukaChilli M ongumsakazi walo uKhozi FM wathi: “Ayiyekwe ilale le ndaba.”
UBonga ugcine ngokubongela uSbu Buthelezi owenza uhlelo olubizwa ngeNdumiso oluhlabene ngendondo eLondon.
“Abalaleli bethu baphinde baveza ukuthi bayazifela ngalo msakazo njengoba bevotele lolu hlelo njengalolo oluthandwa kakhulu emhlabeni jikelele. Njengamanje lunabalaleli abangu-2.4 million,” kusho uBonga ngenkulu intokozo.